« Loka Mandela 2016 » : Voafantina tao anatin’ny maro ny Praiminisitra -
AccueilRaharaham-pirenena« Loka Mandela 2016 » : Voafantina tao anatin’ny maro ny Praiminisitra
25/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noraisina ho isan’ny modely sy fitaratra aty Afrika ny zava-bitan’i Mandela tamin’ny androm-piainany. Ny tantara no maha firenena ny firenena iray. Nisy ny fanomezana loka ho an’ireo olona nahavita be ho an’ny fandriam-pahalemana aty Afrika, mifanaraka amin’ny foto-pisainan’i Nelson Mandela. Nahatratra 3 623 ny mpandray anjara ka ny 3 191 tamin’ireo dia olom-pirenena, ny 25 tamin’ny anaran’ny tenany, ny 388 dia mpandray anjara diplomatika, ny 19 no mpandray anjara ofisialy. Hatrany am-boalohany dia efa tsy noraisina ny fandraisan’anjaran’ireo tsy mba nanana faharesen-dahatra tao aminy izay miisa 867. Nahatratra 2 756 araka izany ireo mpandray anjara ary nekena ny fandraisany anjara. 75 amin’ireo anefa no nosivanina ny mpitsara. Voasafidy tamin’izany hahazo ny “loka Mandela momba ny fandriam-pahalemana”, ny Mpanjaka Mohammed VI. Voafidin’ny mpitsara izy noho ny asa soa nataony ho fampandrosoana an’i Afrika amin’ny alalan’ny Diplomasia ekonomika, mijery ny maha olona, ara-kolotoraly, nitondra filaminana teo amin’ny olona sy ny firenena. Ny nahazo ny “loka Mandela Demokrasia” dia ny Filohan’i Repoblikan’i Mali, Ibrahim Boubacr Keita. Nandray anjara betsaka izy amin’ny fampanjakana ny demokrasia tany avaratr’i Mali tamin’ny alalan’ny fifanarahana Alger, nampisy ny fitoniana politika sy ny filaminana tao Mali. Ny “loka Mandela filaminana” dia azon’ny Filohan’i Niger, Isoufou Mahamadou. Izy moa dia nandray fepetra amin’ny politikan’ny filaminana ary ny fitarihana ireo faritra mankany amin’ny filaminana mba hiady amin’ny asa fampihorohoroana sy ny trafika na zava-mahadomelina tao Sahel sy ny farihin’i Tchad. Ny “loka Mandela” momba ny fandrosoana haingana dia nomena ny Filohan’ny Repoblikan’i Sénégal, Macky Sall, noho ny tetikasany PSE na “Plan Senegal Emergent” mikasika ny fampandrosoana sy ny ho avin’i Senegal. Ny Loka Mandela tsara tantana dia nomena ny Filohan’ny Repoblikan’i Benin, Patrice Talon, noho ny fomba fijery lavitra nananany amin’ny fahaiza-mitantana ny raharaham-bahoaka, ny fametrahany ny fanamby tamin’ny fanatanterahana asa, ary ny fe-potoam-piasana tokana nekeny sy nataony tamim-pahamendrehana. Ny loka Mandela Ubuntu dia nomena an’i Michaëlle Jean, Sekretera jeneralin’ny Frankôfônia. Ny loka Mandela amin’ny finiavana dia nomena an’i Olivier Mahafaly Solonandrasana, Praiminisitra malagasy. Ankoatra ireo dia mbola misy olona maromaro nomena loka araka ny tatitra nataon’ny Filohan’ny Institut Mandela, Paul Kananura, nampahafantatra an’izany.